Nhau - Hunhu hwekuchengetedza-simba uye nharaunda-inoshamwaridzika lime kiln
Iyo lime inodzingwa neyekuchengetedza-simba uye zvakatipoteredza-inoshamwaridzika lime kiln haisi chete yemhando yepamusoro, asi zvakare zvakare yunifomu uye yakatsiga, iine yakakwira lime chiitiko uye yakanaka calcium calcium. Nhasi tichadzidza nezve hunhu hwesimba-rinoponesa uye zvakatipoteredza zvine hushamwari lime lime.
1) Nekuti izvo zvinhu zvinotenderera kumberi zvakaenzana muiri lime yezvidhinha, zvakakwirira uye mune zvakanaka kumhanya mamiriro, izvo zvinopa garandi kumabhizinesi akadai simbi siti yekuwedzera chiyero uye kudzikisa mutengo wekugadzira.
2) High degree of automation, remote control system, vanhu vashoma vanogona kushandisa mutsetse wese.
3) Uniform chigadzirwa mhando.
4) Vertical lime kiln ndeye yakavhurika kukarukureta, yepamusorosoro yekugadzira maitiro, mashoma simba rekushandisa pane yekare dhiraimu lime kiln system, uye inogona kushandisa marara kuputika gasi remoto semafuta izvo zvinowedzera kuchengetedza kwezvakatipoteredza.
5) otomatiki uye echinyorwa system ese ari maviri akashongedzerwa. Kunze kwekushandisa kwemanyorerwo kweiyo-saiti oparesheni bhokisi, ese anogona kudzorwa nekushanda kwekombuta mune yepakati yekudzora imba.
6) Iyo data yezvose zviridzwa (senge yekumanikidza geji, kuyerera mita, tembiricha chiridzwa) inoratidzwa pakombuta uye inogona kudhindwa neprinta.
7) Yakazara Nokia yakangwara inorema kuyera module batching, kuyera uye muripo system.
8) Yakavimbika lime kiln yezvinhu nhanho nhanho, smart masters uye zvimwe zvekushandisa midziyo.
9) otomatiki uye echinyorwa system ese ari maviri akashongedzerwa. Kunze kwekushandisa kwemanyorerwo kweiyo-saiti oparesheni bhokisi, ese anogona kudzorwa nekushanda kwekombuta mune yepakati yekudzora imba.